Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Hackathon voalohany natolotry ny Travel Forward ao amin'ny ExCel London
Hackathon, fantatry ny manam-pahaizana momba ny haitao manerantany, dia hetsika fampiroboroboana vokatra nomerika tsy an-kijanona, izay misy ny olana mba hametrahana vahaolana vaovao.
Mandrosoa no mampiantrano ny voalohany Hackathon ny talata 5 novambra 2019, amin'ny ExCeL London.
Rehefa miova tsy tapaka ny fanavaozana ny teknolojia, dia miteraka tombony vaovao sy teboka fanaintainana ho an'ny mpandeha izany. Zava-dehibe, noho izany, ny mahatakatra sy mamaha ireo fanamby ireo arak'izay tratra.
Niara-niasa tamin'ny manam-pahaizana momba ny hackathon ny Travel Forward Hazo miolikolika hampiantrano ny faramparany #HackTravel hetsika.
Ny hackathon #HackTravel dia hiara-hientana amin'ireo mpilalao indostrialy mpandehandeha mieritreritra toy ny fanombohana ny dia, ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, ny hotely ary ny orinasan-rindrambaiko hiara-hiasa miaraka amin'ireo teboka fanaintainan'ny indostrialy. Travel Forward #HackTravel dia ho sehatra hanehoana ny tena sy fomba fijery vaovao amin'ny alàlan'ny teknolojia.
Richard Gayle, Manazava ny Exhibition Manager for Travel Forward: "Faly izahay fa miara-miasa amin'ny Winding Tree efa niorina tsara mba hampiantrano hetsika miova sy mieritreritra ary manova indostrialy toy ny hackathon #HackTravel.
“Na OTA ianao, hotely, mpivarotra rindrambaiko na manam-pahaizana momba ny teknolojia fizahan-tany tsy miankina, misy ny fanamby lehibe horaisina ho an'ireo mpandray anjara amin'ny hackathon teknika sy orinasa. Ity dia fotoana tsy manam-paharoa hizarana ny fizotran'ny olana amin'ny olona tsy azonao atao matetika, hianaranao sy hiarahanao miasa amin'ny mpiara-mianatra aminao ary hamorona vahaolana azo ampiharina haingana.
Koa manantena ny fandraisana ireo manam-pahaizana rehetra izahay, mba hahafahanay miaraka mamadika ireo hevitra hampandroso ny indostrian'ny Travel ho tena zava-misy. ”
Pedro Anderson, COO, ary mpiara-manorina ny Winding Tree dia nilaza hoe: “Voninahitra ho anay ny mandray anjara amin'ny World Travel Market amin'ny fomba lalina tokoa. WTM London dia iray amin'ireo, raha tsy ny hetsika lehibe indrindra amin'ny indostrian'ny fizahan-tany, ary afaka hampiseho ny haitaonantsika amin'ny mpihaino tsy mbola nisy toy izany izahay.
"Ny Hackathon tsirairay notazoninay taloha dia nahitana vokatra mahavariana, mampiseho ny mety sy ny filàna teknolojia loharano misokatra eo amin'ireo orinasam-pitetezana sy fandraisam-bahiny, ary azoko antoka fa tsy hisy hafa io iray io."
Ny fihaonambe, fampirantiana mifantoka amin'ny haitao ary Fampisehoana fampisehoana dia miara-monina ao anatiny WTM London at ExCeL London manomboka amin'ny 4 - 6 Novambra 2019.
Mba hisoratra anarana ho an'ny Travel Forward, azafady kitiho eto.
GM vaovao ao amin'ny drafitra fialantsasatra any Pennsylvania hampifaly ny vahiny